Geekbench स्नैपड्रैगन 855 स्कोर: यो सबै को सब भन्दा छिटो SoC हो Androidsis
स्न्यापड्रैगन 855 XNUMX लाई Geekbench मा सबैको सब भन्दा छिटो SoC को रूपमा मूल्या as्कन गरिएको छ
गत महिना, क्वालकॉमले यसको उच्च-अन्तको स्मार्टफोनहरूको लागि अर्को पुस्ता फ्लैगशिप चिपसेट प्रस्तुत गर्‍यो: यो Snapdragon 855. यो पहिलो वाणिज्यिक मोबाइल प्लेटफर्म हो जुन G जी जडानको लागि समर्थन प्रस्ताव गर्दछयद्यपि यससँग यसको भिन्नतामा X50 5G मोडेम; त्यहाँ अर्को छ जुन यो कम्पोनेन्ट छैन र यसैले, G जी नेटवर्क प्रदान गर्न सक्षम छैन।
अब, पहिलो स्मार्टफोनको सुरूवात हुनु अघि Snapdragon 855, एक Geekbench सन्दर्भ सूची अनलाइन देखा पर्‍यो उपर्युक्त क्वालकॉम प्रोसेसरबाट आएको दाबी गर्दै। यस्तो देखिन्छ कि स्कोर सीधा निर्माताको परीक्षण एकाईबाट आउँछ। हामी तपाईंलाई विस्तार!
सूचीबद्धले खुलासा गर्‍यो कि चिपसेटले scored,3,545 अ scored्क एकल कोर परीक्षणमा र ११,१11,150० अ scored्कमा बहु-कोर परीक्षणमा। प्याकेज परीक्षण गर्न प्रयोग गरिएको उपकरणसँग GB जीबीको र्याम थियो र अपरेटि system प्रणाली चलाइरहेको थियो Android9पाई.
स्नीपड्रैगन 855 Geekbench मा
पछिल्लो महिना, SDU855 चिपसेटको बीचमा अन्य उत्पादकहरूको फ्लैगशिप चिपसेटको साथ अन्टू तुलना। Kirin 980 y Exynos 9820, कि प्रकट भयो स्न्यापड्रैगन 855 XNUMX अगाडि छ: अर्कोमा तपाईंको परीक्षण ग्यालक्सी एसएक्सएनएमएमएक्स + 343,051 अ .्कको स्कोर प्राप्त। त्यो भन्दा पहिले, एउटा चुहावटले SD855 SoC दर्शायो An 362,292२,२; २ अ An्क AnTuTu मा, अहिले सम्ममा एक Android उपकरण को लागी दोस्रो उच्च; पहिलो मा समान चिपसेटबाट थियो सोनी एक्सपीरिया XZ4, जुन 395,712 XNUMX१२ अ .्कमा समाप्त भयो।
यो अष्ट-कोर प्रोसेसर चार पावर सेभिंग कोरहरू १.1.78 गीगाहर्ट्जमा छ, तीन प्रदर्शन कोर २.2.42 G गीगाहर्ट्जमा घटे, र बढि प्रदर्शनका लागि विशेष "गोल्ड" कोर, २.2.84 गीगाहर्ट्जको अधिकतम घडी दरमा क्लक गरिएको छ। यो संगै जोडिएको छ। अझ बढीको लागि एड्रेनो 640० ग्राफिक्स प्रोसेसर प्रदर्शन। सम्बन्धमा, जस्तै एप्पल A12 बायोनिक चिपसेट र प्रोसेसर Huawei Kirin 980, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8557टीएसएमसी द्वारा n एनएम प्रक्रियाको प्रयोगबाट पनि निर्मित छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » स्न्यापड्रैगन 855 XNUMX लाई Geekbench मा सबैको सब भन्दा छिटो SoC को रूपमा मूल्या as्कन गरिएको छ
LG Q9 र Q9 One सुरुवातहरू नजिकै छन्: एउटा गीकबेन्च र अर्को ब्लुटुथ SIG मार्फत गएको छ।
टेलिग्राममा सन्देशहरू कसरी बचत गर्ने